बोल्ने सालिक: कृति समीक्षा – BRTNepal
बोल्ने सालिक: कृति समीक्षा
भक्त घिमिरे २०७६ असार २६ गते ८:०७ मा प्रकाशित
कृति :-सिमानाको सालिक
कृतिकार :-गीता पुडासैनी
प्रकाशक:-नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल
प्रकाशन वर्ष :-विसं २०७५
आई.एस.बी.एन. न० :-९७८-९९३७-०-४६७०-१
मूल्य :- १५० (ने.रु.)
आफ्नो भावनाका जम्मा ३० वटा पन्तुराहरु एउटा कृतिमा मुठो पारेर हाम्रो हातमा राखिदिएकी छन् गीता पुडासैनीले । हो त्यही एक मुठो कृतिको नाम हो ‘सिमानाको सालिक’ जो आफ्नो निर्जीवतामा गीता पुडासैनीको भावनात्मक ऊर्जा हालेर आम जीवनको गति बुझ्न घरदेशदेखि परदेशसम्म विचरण गरिरहन्छ । कवि गीता पुडासैनीको भावनामा उभिएर त्यो बोलिरहन्छ । देशको वर्तमानसित उदास भएर विषाद चिन्तन गर्ने अनि सुखद चिन्तनमा न्याय र समानताको आवाज पनि उठाइरहेको छ सिमानामा उभिएको त्यो सालिक । त्यसैले म यसलाई ‘बोल्ने सालिक’ भन्न रुचाइरहेको छु । पुडासैनीका कवितामाथि टिप्पणी गर्दै नेपाली साहित्यका धुरन्धर कवि श्यामलले उनको कृति ‘सिमानाको सालिक’ मा लेखेका छन्,“गीता पुडासैनीका कविता नेपाली ग्रामीण नारीका असहज सांस्कृतिक जीवनका उछ्वासहरु हुन्…!” तर, म भन्छु स्रष्टा पुडासैनीका कविताहरू नारीका मात्र होइनन्, ‘पाखुरा’का उदगारहरु पनि हुन् । जिन्दगीको दार्शनिक पक्ष केलाउँदै सोही कृतिमा मन्तव्य राख्ने क्रममा अर्का कवि ज्योति जङ्गल भन्छन्,“जिन्दगी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिँदैन । न जिन्दगीको लिंगीय आयामबाट सामाजिक प्रश्नहरू सकिएका छन् !” यदि यसो हो भने कवि श्यामलको विचार यहीँनेर काटिएको छ । यसर्थ, गीता पुडासैनीका कविताहरू असहज नारी जीवनका उछ्वासहरुमात्र होइनन् । यी कविताहरू समग्र सामाजिक जनजीवनलाई अभिव्यक्त गर्ने सजीव हरफहरू पनि हुन् ।
‘सगरमाथाको सम्बोधन’ शीर्षकीय कवितामार्फत सर्जक सुरुमै हिमालको उचाइ र समुद्रको गहिराइसँग मानवीय संवेदनाहरूलाई जोडिदिन्छिन् । यसरी नै ‘आइमाई, आमा र पत्नी’ शीर्षकमा उनको अर्को सशक्त कविता बगेको छ ।
नेपाली भूगोलको इतिहासमा सामेल नालापानीको युद्धको झलक झैँ लाग्ने निम्न प्रस्तुतिले वीरतापूर्ण आर्यसभ्यताको चर्चा पनि उठाएको छ ।
“आइमाई हुनुको पर्याय
चुरा बजाउनु मात्र हैन…!”
“यदि पढिरहेका छौ भने
आर्य सभ्यताको इतिहास
त्यो पनि पढेको हुनुपर्छ
तरबार उठाएकी आइमाई…!” (कविता शीर्षक आइमाई, आमा र पत्नी)
कविताको लक्षण वा आर्यसभ्यताको प्रसङ्ग जहिलेको, जहाँको भए पनि नारी जीवनलाई अवहेलित नोकर-चाकरको दर्जामा राख्ने हाम्रो समाजलाई ललकारेको छ कविताले । आर्यसभ्यतामा आइमाईहरू कमजोर थिएनन्, अहिले पनि आइमाईहरू कमजोर बन्नु हुँदैन भन्ने मूल सन्देशसहित आइमाईको हैसियत दबाउन चाहने पुरुष प्रवृत्तिसमक्ष चुनौती बनेर उनी उभिन्छिन्-
आइमाई मात्र हुँदैन
यति तिमीले बिर्सिएका छैनौ भने
हिजो मात्र हो तिमीलाई
आइमाईको गर्भबाट जन्माइएको !”
सोही कवितामा आग्रह, याचना र गुनासोको रूपमा विपरीत लिंगीय अवधारणाहरूलाई सम्झाउँदै स्रष्टा समन्वयकारी भूमिकामा भन्छिन्-
“पत्नी हुनुको पर्याय
पराजित हुनु हुँदै हैन
किन बुझ्दैनन् मेरा पिता?
मेरा दाजुभाइ ?
किन बुझ्दैनन् मेरो प्रेमी–
जसले युगदेखि पर्खिरहेको एक झुल्को प्रकाश
प्राप्त गर्छन् ?”
आइमाई, आमा र पत्नीमा के फरक छ ? भन्दै प्रश्नको चुनौती दिएर समाजलाई सोच्न बाध्य पार्ने स्रष्टा पुडासैनी स्वयं नारी भएर आफ्नो अस्तित्वको मात्र चिन्तन गरिरहेकी छैनन् । यहाँ समाज, देश, समग्र जीवन र जगतको चिन्तन समेटिएको छ ।
गीता पुडासैनीका कविताहरू ठुलो दोष लगाउन मिल्ने खालका छैनन् । यद्यपि, सामान्य पाठकहरूलाई बुझ्न कठिन हुने लक्षण पनि नभएकाचाहिँ होइनन् उनका कवितामा । केहीमा चाम्रो बौद्धिकता समेटिएको छ उनका कविताहरूमा । हुन त शङ्कर लामिछानेको ‘अब्सट्राक चिन्तन प्याज’देखि इन्द्रबहादुर राईका आयामेली कविताहरू सामान्य पाठकका लागि अप्ठ्यारोमा फलेको तरुल जस्तै होलान् । गीता पुडासैनीका कवितामा त्यति धेरै बौद्धिकताको कब्जियत पक्कै पनि छैन । जे होस्, समग्रमा गीता पुडासैनीका कविताहरू साहित्यिक आकाशको मूल गन्तव्यमा पुग्नलाई यात्राको एक चौथाइ नाघ्दै गरेको बटुवाझैँ लाग्दछन् ।
मैले ‘सिमानाको सालिक’ का स्रष्टा गीता पुडासैनी नामको व्यक्तित्व चिनेको छैन । कहिल्यै देखेको वा बोलेको पनि छैन । केवल केही शब्दहरू हामीले साटासाट गरेका छौँ । अतिसंक्षेप जानकारी अनुसार उनको यो प्रथम कृति हो । कुनै पहिलो कृतिवाला कविका कविताहरू यस्तै हुन्छन् भन्ने कुनै स्थापित मान्यता वा मानक त बनेको छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, गीता पुडासैनीको कवित्वकला हेर्दा उनी कुनै सशक्त कविभन्दा कम छैनन् ।
कविताको नाममा यसरी सिङ्गो देश बोकेर उभिएका गीता पुडासैनीजस्ता लेखक, स्रष्टाहरूलाई बँचाउनुपर्ने दायित्वबोध समाजले गरोस् । कवि, लेखकजस्ता साहित्यका कृषकहरूले लेखेरै गाँठो र पस्यौटीमा नपुगेसम्म जीवनको डोरी बाटिरहन पाउने सहजता अनुभूत गर्न सकुन् !
वर्तमान परिवेशको मानवीय जीवनयात्रामा आधुनिक यन्त्रप्रविधिले प्रवेश गरेको छ । यसले अधिकांश युवा-ऊर्जालाई यान्त्रिक बनाउँदै लगेको छ । सो अवस्थामा कसैले कसैको भावनाहरूको पैरवी गर्ने कुरै भएन । यसका अतिरिक्त अहिले सामाजिक जीवनको गति नै तितर-बितर छ । व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय, क्षेत्र हुँदै समग्र देशको पहिचान बन्ने प्रक्रिया अहिले भङ्ग भइसकेको छ । यति बेला उपार्जनको लक्ष्यले मान्छेहरूलाई परिवार र समाजबाट फुटाइसकेको छ । चालिस वर्ष कटेपछिको बुढ्यौलीमा मात्रै जीवनको उमङ्ग र रसपूर्ण सहचर्य भोग्न सकिने अर्थमा ‘साइँली’ बोलको गीतै बनेको कुरा कसैलाई मैले बुझाइरहनु पर्नेछैन । यो परिवेशमा युवापुस्ता कला, साहित्य, सामाजिक, नैतिक अनुशासनका आधारहरूबाट पूर्णतः विमुख भइरहेको छ । यो बेला साहित्यका उत्पादक, शब्दका कृषकहरूले एकदमै संवेदनशील बनेर आफ्नो खेती बढाउनु जरुरी भएको छ ।
हामीले साहित्यको इतिहास पनि पढ्दै आएका छौँ । उहिलेका शासकहरूले लेखेकै कारण कवि र लेखकहरूलाई कैद गरेका, हत्यासमेत गरेका छन् । तर, त्यसको सकारात्मक पाटो के छ भने कविका कलाशिर्जनाले कैयौँ शासकहरूलाई प्रभावित पनि बनाएको छ । कविता सुनेरै उनीहरूले नीतिव्यवस्थामा सुधार पनि गरेका छन् । नकारात्मक, सकारात्मक दुवै प्रवृत्तिमा एउटा कुरो के निश्चित हुन्छ भने उहिले साहित्यको मूल्य तत्कालै समाजमा लागू हुन्थ्यो । कसले के लेख्यो वा लेख्तैछ भनेर खोजी नै भइरहन्थ्यो ! तर, आज कसले के लेख्तैछ भनेर हेर्ने वा खोजी गर्ने फुर्सद धेरै मानिसहरूलाई हुँदैन । त्यसर्थ धेरैको ध्यान तान्नलाई केही सर्जकहरूले आफ्नो कृतिलाई अतिरञ्जनपूर्ण पनि बनाइदिन्छन् । यस्तो अतिरञ्जनबाट कवि पुडासैनी मुक्त छिन् ।
यस अर्थमा गीता पुडासैनीले भन्दा पनि पहिले पनि धेरै कविले धेरै कविता लेखेका छन्, प्रकाशित गरेका छन् । तर, ती सिर्जनामा सम्मिलित सन्देशहरूलाई समाजले कतिको उपभोग गऱ्यो होला ? यो प्रश्न सर्जकहरूले आफैँलाई गर्नुपर्ने दिन आएको छ । यो म किन भनिरहेको छु भने यति बेला संसारभरि नै लिखित साहित्य पढ्नेहरूको सङ्ख्या द्रुत गतिमा घटिरहेको छ । अझ नेपालीका पाठकहरूको त कुरै नगरौं । गीता पुडासैनीको सिमानाको सालिक प्रकाशित भएको वर्षै भइसक्यो । खै कति पाठकको नजरको सिमानासम्म पुग्यो, त्यो भन्न सकिन्न ! अब उनले पनि आफ्ना कृतिका भावीपुस्ताहरु जन्माउनअघि प्रकाशित कृतिको उपभोग कति भएको छ भनेर निर्धारित गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
(लेखक भक्त घिमिरे, साहित्य परिषद्-भुटानका पूर्वाध्यक्ष र हालः पेन्सिलभेनिया/अमेरिका बस्नुहुन्छ । )